Maxaa kajira in Kenya iyo Soomaaliya ay ka wada hadlayaan muranka badda? - BBC News Somali
Xigashada Sawirka, Axmed Ciise Cawad
Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Kenya
Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beenisay wararka sheegaya in wadahadal ku aadan muranka badda ay kula jirto dowladda Kenya.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad oo ka hadlay arrintan oo soo ifbaxday dhowr maalmood kahor ayaa sheegay in aysan jirin wax wadahadal ah oo ku aadan dacwadda badda oo ay dowladda federaalka la leedahay Kenya.
Axmed Cawad ayaa sidoo kale sheegay in wadashaqeyn fiican ay ka dhaxeyso labada wadan, balse mas'uuliyiinta dowladda federaalka aysan ka warqabin arrintaasi.
''Arrintan badda waxay inoo joogtaa maxkamadda, oo sidii loo geeyay ayay inoo tahay, mana jirto wadahadal u dhaxeeya labada dal oo ay ogyihiin Madaxweynaha, raiisul wasaaraha, raiisul wasaare ku xigeenka iyo aniga oo ah wasiirka arrimaha dibadda''waxaa sidaasi sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in dacwadda badda ee u dhaxeysa Kenya iyo Soomaaliya ay tahay mid wali hortaalo maxkamadda cadaaladda adduunka.
Qareennada Soomalaiya matalaya
Hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa yimid, kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya, Monica Juma ay sheegtay in wadahadal ku saabsan muranka badda ay la leeyihiin dowladda federaalka ee Soomaaliya.
''Arrinta muranka badda wadahadal ayaa ka leenahay anaga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya'' waxaa sidaasi wargeyska New African Magazine u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya.
Labada dalba waxay sheeganayaan lahaanshaha dhul badeed bedkiisu uu gaarayo 142 kun oo kiloomitir, oo labo jibbaaran, waxayna sidaasi darteed Soomaaliya ka dalbatay maxkamadda inay xadeyso xaduudda badda ee labada dal si waafaqsan xeerarka caalamiga ah.
Soomaaliya ayaa dacwaddan u gudbisay Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee fadhigeedu yahay magaalada Hague sanadii 2014-kii.
Kenya ayaa ku doooday in dacwaddan ay ka baxsantahay xeer xayndaabka maxkamadda, arrintaasi oo ay maxkmaddu ku gacan seyrtay, kana dalbatay Kenya inay jawaab ka bixiso eedeymaha ay Soomaaliya soo gudbisay.
Maxkamadda cadaaladda ayaa ilaa iyo imika aanan go'aan ka gaarin muranka badda labada wadan, balse Kenya ayaa dhowr jeer sheegtay in muranka badda ay tahay in labada dal ay qaab wadahadal ku xalliyaan muranka badda.
'Welgiis isma dhiibi doono'
La taliyihii Trump ee coronavirus oo is casilay